SIDA LOO XAKAMEYNAYO YAANYADA XILLIGA JIILAALKA - BEER CAGAARAN
Muddada firfircoon ee isticmaalka yaanyada ayaa hoos u dhacaya dhamaadka xagaaga iyo bilowga xilliga dayrta: waqtigaani waxay yihiin kuwa ugu caansan, kareysa iyo waxa ku jira xaddiga ugu yar ee Nitrates. Dabcan, xilliga qaboobaha, waxaad ka iibsan kartaa yaanyada dukaanka, laakiin qiimaha iyaga ayaa aad u sarreeya, dhadhanka iyo urta ma aha mid u dhigma midka ugu fiican. Sidaa daraadeed, hooyooyinka khibrada leh waxay raadinayaan siyaabo lagu xalliyo dhibaatadan, iyo in badan oo badanaa waxay la xiriiraan habka lagu yareeyo khudaarta. Maanta waxaan eegaynaa sida loo yareeyo yaanyada xilliga qaboobaha ee qaboojiyaha cusub ka dibna waxa laga diyaarin karo iyaga.
Waxaa jira daqiiqado badan oo wanaagsan oo lagu keydsho yaanyada:
keydinta lacagta xilliga qaboobaha;
diyaarinta siyaabo kala duwan oo u oggolaanaya inay u isticmaalaan suxuuno kala duwan;
ilaalinta ugu badan ee nafaqooyinka;
urta iyo dhadhanka dhadhanka miraha cusub looma lumin;
roonaanta isticmaalka diyaargarowga, marka la eego xaashida saxda ah;
fududaynta iyo wakhtiga ugu hooseeya iyo kharashka shaqada ee loogu talagalay qaboojinta.
Ma taqaanaa? Ugu horreyntii, yaanyada yaryar ee Aztec waxay u egtahay "yaanyo", Faransiiskuna waxay soo jiidanayeen "yaanyo" oo adduunka ah. Ereyga "yaanyo" wuxuu u muuqday Talyaaniga, halkaas oo mirahaas loo yaqaan "pomo d'oro", oo macnaheedu yahay "tufaax dahabi ah". Haddaba haddaba "yaanyo" iyo "yaanyo" waa calaamad muujinaysa khudradda isku mid ah.
Xulashada midhaha ku habboon
Dammaanadda hannaanka tayada leh waa doorashada saxda ah ee badeecada.
Marka aad dooranayso miraha waxaad u baahan tahay inaad fiiro gaar ah u yeelato xaqiiqda ah inay iyagu yihiin kuwo aan fiicneyn, laakiin aan aad u fiicneyn. Xulashada waa ka fiican tahay in la siiyo yaanyada dhexe ee-bislaaday, laakiin aan aad u culus, sidaas darteed ma noqon doonaa cufan sida loo baahan yahay. "Kareemka" ee "Novice" kala duwan ayaa loo tixgeliyaa inay yihiin miraha ugu fiican ee lagu keydiyo.
Diyaarintiisa waa la fulin karaa illaa bilawgii Nofembar. Waxay si isku dhafan u wadaagtaa dhammaan sifooyinka kuwaas oo ku habboon qaboojinta: dhadhanka, cufnaanta, fareemka. Marka la eego qaabka kala duwanaanshahan waa mid qotodheer, waa mid sahlan oo ku habboon in la gooyo.
Si aad u sameyso midhaha miraha qaabab kala duwan, waa inaad soo baarto qalabka wax lagu kariyotaas oo gacan ka geysan doonta hannaanka iyo fududeynta hawsha diyaarinta badeecada lagu keydiyo:
mindi, isagoo ku duubay qori. Waxay la socotaa mindi noocan oo kale ah oo aad si fiican u jilcisan kartid yaanyada, adoo aanad jajabin, kaas oo kuu oggolaan doona inaad ku hayso dhammaan juuska gudaha gudaha xaleefyada;
taarbuun caag ah oo loogu talagalay in la dhigo meel banaan oo lagu keydiyo qaboojiyaha;
weel si loogu kaydiyo yaanyada, tusaale ahaan, weel caag ah ama bacaha balaastikada ah;
tuwaal waraaqo ah si aad u qallajiso tamaandhada ka dib markaad maydho
boorsada jikada si loo yareeyo yaanyada;
saxarada qoto dheer ee kaydinta dhexdhexaad ah ee alaabada loo diyaariyey in lagu keydiyo.
Diyaarinta yaanyada lagu keydsho waa mid sahlan. Markaad dooratid miraha ku habboon, waa in si fiican loo dhaqo biyo qabow oo qaboojiyaha lagu tirtiro tuwaal waraaq ah si ay u nuugaan dhammaan biyaha oo fara galin doona keydinta caadiga ah ee alaabta.
Ma taqaanaa? Ilaa bilowgii qarnigii XIX ee Yurub, tamaandhiga waxaa loo tixgeliyey geedka sunta ah iyo midhaha aan la cunin. Waxa loo adeegsan jiray dalagyo qurxoon oo qurxinayay hanti dad ah.
Hababka la qaboojiyo: cuntooyinka talaabo-tallaabo ah
Tomato - sheyga loo isticmaali karo suxuuno kala duwan, guud ahaan ama foomka dhulka, iyo qaabka tamaandhada la kariyo. Sidaa daraadeed, waxaan tixgelineynaa tallaabo tallaabo tallaabo ah oo loogu talagalay diyaarinta yaanyada si loo yareeyo siyaabo kala duwan.
Waxaan kugula talinaynaa inaad barato cuntada sida loo yareeyo yaanyada goosashada xilliga qaboobaha: Cagaar, gaajo leh foosto oo cusbaynaya hab qabow; yaanyada la kariyey iyo la kariyey; salad leh yaanyo, "Faraha ligne!" iyo suugada yaanyada.
Miraha oo dhan
Habka ugu fudud ee ugu dhakhsaha badan ee lagu xakamayn karo waa midho goosashada khudaarta oo dhan, laakiin tixgelin haddii ay suurtagal tahay in la yareeyo yaanyada oo dhan qaboojiyaha. Sida cagaarka kale, yaanyada oo dhan waa la qaboojin karaa: ka dib markii barafka, ma noqon doonaan wax ka xun kuwa cusub.
Barafku waa mid dhakhso ah, haboon oo si sahlan loo gooyo khudradda, miraha, miro iyo cagaarka. Baro sida loo xoqdo digir cagaaran, eggplants, bocorka, strawberries, tufaax, blueberries.
Si loo qaado goosashada miraha xilliga qaboobaha sidan, waxaa lagula talinayaa raac tilmaamaha:
Yaanyada yaryar ama dhexdhexaad ah, oo hore u dhaqday oo la qalajiyey, waa in la dhigaa saxaarad. Tijaabooyinka muhiimka ah ee lagu keydiyo habkan waa in yaanyada waa in la dhigo lakabka keliya.
Marka xiga, saxaarada waxaa loo diraa qaboojiyaha si uu u qaboojiyo midhaha.
Ka dib markii yaanyada si fiican loo qaboojiyey, waxaad u baahan tahay inaad ku qasbo weelasha ama baakadaha, waa in la abuuro nooca vacuum for iyaga, ka saara hawada oo dhan. Dabcan, suurtagal ma aha in la sameeyo tan weel, laakiin waxaad tijaabin kartaa bac caag ah.
U soo dir banaantii la helay ee qaboojiyaha.
Waxaa sidoo kale jira hab lagu xakamaynayo yaanyada oo hore loo soo saaray.
Si aad u sameysid banaan sidan, raac tilmaamaha:
yaanyada la doortay waa in si wanaagsan loo maydho oo loo sameeyaa jarjar gooyo korkiisa midhaha;
Waa muhiim! Gooyadu waa in si taxaddar leh loo sameeyaa, si aanay u dhaawicin jidhka, oo gooyo maqaarka kaliya.
Ka dib markii biyo karkariyo, waa lagama maarmaan in la yareeyo yaanyada biyaha karkarinaya si ay dareeraha u buuxiyaan midhaha;
biyo karkaraya, yaanyada ayaa lagu hayaa illaa daqiiqo, ka dibna si dhakhso ah loogu wareejiyo biyo qabow oo qabow oo lagu hayo ilaa 10 ilbiriqsi;
markaa waa inaad si dhakhso ah uga saartaa yaanyada biyaha iyo ka saar maqaarka, kaas oo si tartiib ah ugu fiiqi karto mindi;
yaanyada diiray waa in la dhigaa lakabka keliya ee saxda ah, isagoo horay ugu daboolay filim foorno ah, oo loo diro barafeeyaha si loogu xakameeyo;
Waxaa muhiim ah in la hubiyo in yaanyada aysan taaban midba midka kale, maadaama ay wada jiri karaan, oo taasna waxba kama qaban kartid;
ka dib marka la qaboojiyo kadib, biilka waa in lagu dhejiyaa weel ama baakad, si adag u xiran oo loo diro qaboojiyaha kaydinta.
Wareegyada Billet waa mid aad u habboon pizza jecel. Si aad u samayso qalabka shaqada sidan, waa inaad:
Yaanyada la dhaqay iyo kuwa la qalajiyey ayaa la gooyaa goobo leh mindi ilig ah si ay u dhumucdoodu u dhexeyso 0.7 mm.
Dabool saxaarada leh foorno ama xayawaan duugmo ah, samee wareegyada yaanyada la jarjaray si aanay u taaban midba midka kale.
Meelaha la diyaariyey waxaa la dhigayaa qaboojiyaha 2 saacadood. Waa in la xusuustaa in mid kasta oo qaboojiyayaashu ay ka duwan yihiin, waana lagama maarmaan in la xakameeyo heerka xakamaynta tamaandhada adigaa.
Marka lagu dhameeyo qaboojinta ayaa dhacdey, meelaha banaan waa in lagu dhejiyaa weelka ama bacaha balaastigga ah, si adag u xiran ama xiran oo loo diro qaboojiyaha si loogu sii kaydiyo.
Waa mid aad u habboon marka aad jarjartey yutiilitiga, kaas oo aad ka bixi kartid qaboojiyaha oo ku dar suufka iyada oo aan la hirgelin wax wax qabad ah, waqti iyo dadaal.
Baro sida loo diyaariyo loona ilaaliyo qajaarka jiilaalka, basasha cagaaran, basasha, cagaarka, caleemaha, caleemaha, caleemaha, casaan iyo caanaha, broccoli, digir cagaaran, xashiishka, digirta asparagus, physalis, celery, horseradish , boletus, boqoshaada caanaha.
Sidaa darteed, tixgelin sida xaraash yaanyada qaybaha qaboobaha talaabo talaabo ah
si loo yareeyo yaanyada sidan oo kale, mid waa inuu soo qaado miraha ugu khatarsan ee ku jira biyaha ugu yar;
yaanyada la dhaqay oo la qalajiyey waa in la gooyaa xabadaha;
dheeraad ah waa lagama maarmaan in la diyaariyo weelasha yar yar ama bacaha balaastikada ah;
Waa muhiim! Waxaad u baahan tahay inaad xisaabta ku darto ka dib markaad barafoobeyso, bacda oo la yareeyo yaanyo, ku shubi qayb ka mid ah iyaga oo mar kale lagu shubo badeecada la midka ah waa mamnuuc, sidaa daraadeed waxaa lagula talinayaa in marka hore la kordhiyo tirada yaanyada loo isticmaali karo wakhti kasta Bacda ama weel kasta.
haddii aad qorsheyneysid inaad ku xakameyso qaybo aan diirneyn, waa in la farsameeyaa qaabka kor ku xusan (ku shub biyo karkaraya);
Koontooyinka diyaarinta ah waxaa lagu duubayaa bacaha ama weelka waxaana loo diraa barafeeyaha qaboojinta iyo kaydinta.
Habkani waa kan kaliya oo ah gabi ahaanba yaanyo loo isticmaali karo, lakiin xitaa markaa si ay ufilan yihiin. Miro badan ayaa sidoo kale loo oggol yahay.
Waxay tixgelin doonaan talaabo talaabo talaabo ah oo loo sameynayo yaanyada la shiidey loogu talagalay qaboojinta:
Tamaandho waa in si wanaagsan loo dhaqo, diiray oo jarjarey si ay u sahlanaato in ay ku sii socdaan iyada oo Booqday Furimaha Dagaalka hilib ama la jarjarey.
Natiijada barandhada la shiiday ee yaanyada waa in lagu shubaa weelka balaastigga ah, si adag u xir oo loo soo diro barafeeyaha.
Waa in lagu dhajiyaa maskaxda in dareeraha ay ballaarin karaan habka qaboojinta, sidaa daraadeed waa inaadan ku darin baradho la shiiday oo ah geeska weelka.
Waxaa sidoo kale jira hab xiiso leh oo ah baradho la shiiday keegga barafka. Si taas loo sameeyo, ku shub tamaandhada si aad ugu dhajiso caagaga, sug ilaa inta ay si buuxda u barafoobeyso, ka dibna koonaha u wareeji bac ama weel una soo dir qashinka kaydinta.
Foomkan, baradhada la shiiday ayaa si fudud loo isticmaali karaa iyada oo si fudud looga tirtiro tirada loo baahan yahay ee xabo ee xirmada.
Waxaad u keydsan kartaa geedo xilliga jiilaalka ma aha oo kaliya qalajinta. Baro waxa la sameeyo dill, dhir, cilantro, arugula, isbinaajka, sorrel si loo kala saaro menu jiilaalka.
Imisa ayaad ku kaydin kartaa
Nolosha shiilan ee yaanyada la qaboojiyey waxay ku xiran tahay heerkulka qaboojiyaha. Haddii uu ka hooseeyo -18 ° C, markaa nolosha tufaaxa ee yaanyada waxay noqon doontaa 10 bilood. Haddii heerkulbeerka barafeeyaha uu ka sarreeyo tan, nolol shafka ah ee banaanku wuu yarayn doonaa waxayna noqon doontaa illaa 4 bilood.
Tamaandhada la barafeeyey waa in laga saaraa barafeeyaha waxaana lagu hayaa heerkulka qolka ilaa 20 daqiiqo. Si dhamaystiran xilligaas, yaanyada ma dhalaalin, laakiin noqdaan kuwo jilicsan, taas oo u oggolaanaysa in loo isticmaalo jarista siyaabo kala duwan. Haddii aad qorsheyneyso inaad isticmaasho yaanyada oo dhan saladh, ka dibna laguma talinayo in la diiriyo: xaaladdan, waa inaad tufaaxa ku shubtaa xaleef khafiif ah oo ku dar madoow kale inta aadan u adeegin saxanka miiska.
Waa muhiim! Haddii aad qorsheyneyso in aad diirto yaanyada la qaboojiyey ka hor intaanad ku darin saxanka, waa inaad u dirtaa biyaha kulul ilaa 10 ilbiriqsi oo ka saar maqaarka dhaqdhaqaaq yar.
Haddii aad haysatid yaanyada xayawaanka ah, ka dibna la diido iyaga laguma talin, sababtoo ah ka dib markii barafka lagu shubo oo lumiyo muuqaalkooda soo jiidashada leh.
Sidoo kale waa ku haboon tahay inaad sameysid tamaandhada la kariyey. Waxaa lagu daraa gooni ahaan inta lagu jiro cunto karinta, iyada oo aan la jarin.
Soodhaha yaanyada, sidoo kale, laguma dhimi karo, oo ku dar badeecada barafaysan inta lagu jiro karinta. Waxaa jira kiisaska marka loo baahan yahay in la jarjaro, tusaale ahaan, marka la kariyo kariimka, taas oo markaas lagu ridi karo qaboojiye ama miiska saaran, si aad u kululaato heerkulka qolka.
Baro cuntada ugu fiican ee jeeriga jiilaalka, strawberries, blueberries, lingonberries, isteroberi, tufaax, abrikot, gooseberries, currants (casaan, guduud), yoshta, chokeberries, buckthorn badda, watermelon.
Maxaad kari kartaa
Yaanyada la barafeeyey waxaa badanaa loo isticmaalaa suxuunta kala duwan, markaa ka fikir waxa la sameeyo iyaga iyo wixii macallimiin culus la diyaarin karo.
Meelaha la qaboojiyay ayaa faa'iido u yeelanaya maraqa, maraq, suugo, pizza, suugo, suxuunta la dubey. Guud ahaan, waxaad isticmaali kartaa yaanyada la qaboojiyey si la mid ah sida kiisaska yaanyada cusub - wax kasta waa ku kooban xajmigaaga iyo xaddiga alaabta la qaboojiyey.
Sidaa daraadeed, way fududahay in lagu yareeyo yaanyada qaboojiyaha, waxa ugu muhiimsan waa in la tixgeliyo qaar ka mid ah xasaasiyadaha marka la dooranayo badeecada oo raaco talooyinka lagu sharraxay qodobkan si loo fududeeyo habka loo diyaariyo loona yareeyo yaanyada sida ugu macquulsan.